प्रचण्ड, माधव नेपाल, वामदेव गौतमसहित ५ नेतामाथि सुरक्षा निगरानी - नेपालबहस
२ मंसिर २०७७ | १९:२४:२५ मा प्रकाशित
२ मंसिर, काठमाडौं । ‘बरु अप्रिय कदम चाल्छु, तर कुनै हालतमा राजीनामा दिन्न’ भनेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डसहितका ५ जना नेतामाथि उच्च सुरक्षा निगरानी बढाएका छन् । आफूविरुद्ध फरक राजनीतिक प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा ल्याउने अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसहितका ५ नेतामाथि उच्च सुरक्षा निगरानी बढाएका हुन् ।
उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा प्रचण्डसहितका नेताहरुकाे गतिविधि निगरानी गर्न सुरक्षा निगरानी बढाइएको हाे । सुरक्षा निगरानी बढाइएका नेताहरुमा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल समेत छन् ।
उनीहरुको भेटघाट र हिडडुलमा उच्च निगरानी गर्न निर्देशन दिइएको छ । पछिल्लो समय भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका अधिकारी लगायत विदेशी कुटनीतिज्ञसँगको भेटघाट बढेपछि शीर्ष नेताहरुको सुरक्षा निगरानी बढाइएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
कार्तिक २७ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले ओलीविरुद्ध फरक राजनीतिक प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सो प्रस्ताव दर्ता भएपछि ओली पक्ष झस्किएको छ । खासगरी पटक पटक प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्दा पनि नदिएपछि यसपटक पार्टी विभाजन नै भएपनि ओलीविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्ने पक्षमा प्रचण्डसहितका नेताहरुले राजनीतिक प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
यसले ओलीले औपचारिक रुपमै गाह्रो परेको छ । यस्तो बेला ओलीले नेताहरुमाथि सुरक्षा निगरानी बढाएर थप कदम चाल्ने सम्भावना छ । तर के हुन्छ ? भन्ने खुलेको छैन् । विवाद बढ्दै गएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओली र प्रचण्डसँग पालैपालो भेटवार्ता गरेकी छिन् ।
दुई दिनअघि ओलीलाई शीतलनिवास बोलाएर भेटवार्ता गरेकी भण्डारीले आज मात्रै प्रचण्डसँग पनि भेटवार्ता गरेकी हुन् ।
नेपाली सेना पनि ‘हाई अलर्ट’मा
प्रधानमन्त्रीको ओलीको निर्देशन पाएपछि नेपाली सेना पनि ‘हाईअलर्ट’मा बसेको स्रोतले जनाएको छ । ईश्वर पोखरेललाई हटाएर रक्षामन्त्रालय आफैसँग राखेका प्रधानमन्त्री ओलीले सेनालाई उच्च तयारीमा रहन निर्देशन दिएका स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाली सेनाको उच्च स्रोतका अनुसार ओलीको निर्देशनपछि सेना हाईअलर्टमा बसेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले कडा कदम चाल्छु भनेर पटक पटक चेतावनी दिएपनि उनले अहिलेसम्म त्यस्तो डरलाग्दो कदम भने चालेका थिएनन् ।
तर पछिल्लो दुई दिनयताको प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता र कार्यशैली हेर्दा खतराको संकेत देखिएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ ।
पोखरामा प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना, पाइलटको मृत्यु ८ घण्टा पहिले
वालिङलाई पन्ध्र हजार सर्जिकल मास्क सहयोग ३ दिन पहिले
चापाकोटमा नेपाली कांग्रेसको भव्य अन्तरक्रिया कार्यक्रम ४ दिन पहिले
वाग्मती सफाइ महाअभियान : ४००औँ हप्तालाई विशेष बनाइन तयारी शुरु १ दिन पहिले
ओली बालुवाटारमा, प्रचण्ड धुम्बाराहीमा व्यस्त ! २ हप्ता पहिले
सुर्खेतमा संक्रमित वृद्धको ज्यान गयो १ हप्ता पहिले
छुट्टाछुट्टै स्थानबाट ११ जुवाडे प्रहरी नियन्त्रणमा २ हप्ता पहिले
ट्रम्प भन्छन्- ‘मतगणना नरोके अदालत जान्छु’ ३ हप्ता पहिले
राष्ट्रिय स्तरको ‘योङ् अन्तरप्रनर कन्ल्केभ २०२०’ भाेलीदेखि सुरू हुँदै ३ हप्ता पहिले
आजदेखि जलजलामा एक घर एक पीसीआर परीक्षण ४ हप्ता पहिले
कर हटाउने निर्णयको विरोधमा मुद्रण व्यवसायी सडकमा १ हप्ता पहिले
चेल्सीका फरवार्ड ओडोइलाई कोरोना भाईरसको संक्रमण ८ महिना पहिले
सिद्धार्थ राजमार्ग ३ महिना पहिले
संक्रमण देखिएपछि आइसोलेशनमा राखिएका एक थुनुवा फरार ३ महिना पहिले